डा.भट्टराई यसरी भए असफल, जसपा विभाजनतर्फ -
डा.भट्टराई यसरी भए असफल, जसपा विभाजनतर्फ
५ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०१:११ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on डा.भट्टराई यसरी भए असफल, जसपा विभाजनतर्फ
काठमाडौं– बौद्धिक व्यक्तित्व कम्युनिस्ट पार्टी त्यो पनि माओवादी छाडेर उपेन्द्र यादवसँग जोडिएका डा.बाबुराम भट्टराईको योजना सत्ता लम्पट, पद स्वार्थका धनाढ्य कसैले मानेनन् । समाजवादी नेता महन्थ ठाकुरले त मानेनन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मान्ने कसरी ? माओवादीबाट भाँडिदा डाक्टरले खोलेको पार्टीलाई भारतरले अर्बौ खर्च ग¥यो । सुरुआतमा खर्चको रमिता देखेर पछि लागेका लोभीहरू पुरानै घरमा फर्किए । डाक्टरको राजनीति खुम्चिँदै गयो । उनले डलर लिएर एमालेबाट भाँडिएका अशोक राईको नेतृत्व, उपेन्द्र यादवजस्ता रौतहट काण्डका नायकसँग डा. जोडिदा हाँसको भीडमा बकुल्लाजस्तै भयो ।
डा.भट्टराईका योजना प्रचण्डको संगठन, मोहन वैद्यको विचारले माओवादी चल्थ्यो भने एमालेले हेप्न सक्ने थिएन । एमाले विचारले खारिएको र नैतिकताले भरिएको होइन । धनले सुन्मिएको, कामहीनले पुष्टिएको शक्ति थियो भनेर यिनै डाक्टरहरूले भन्दै आएका थिए । समयले त्यो पुष्टि भयो, विचौलिया दलालहरूले बालुवाटारको साथ लिएर भारतसँग खरिद गरिएको कोभिड खोप भित्र्याउन दिएनन् । डाक्टरले नयाँ अनुहारलाई प्रधानमन्त्री बनाऊँ, त्यही युवाको जमातले चुनाव गरोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दा सुन्ने नेतासमेत भएनन् ।
जसपाको यादव पक्षले ओली शासनलाई रुचाएन । तर, भारतकै निर्देशनमा चल्ने पार्टी खोल्ने महन्थले रुचाए । हृदेयश त्रिपाठी पनि ओली सत्ताकै स्वास्थ्यमन्त्री छन् । यिनले बालुवाटारको हैकम ख्याल गरेका छन् । डा.भट्टराई जहाँ छन् त्यसले न त शासनको बागडोर समाल्छ । जसपाले मधेसमा समेत पक्षपात भएको देख्दैन । नगरिकता नपाउने त्यही छन् । तल्लो जातिमाथि अन्याय गर्ने दलित र गरिबलाई दमन गर्ने, समाजमा बोक्सी हुँदैन भनेर मधेसका नेताले बोलेका छैनन् । जहाँ विद्वानहरू छन् । राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, पटकपटक सत्तामा गए । तीनले आफ्नै जिल्लामा परिवर्तनको सिन्को भाँचेका थिएनन् । बरु भ्रष्टाचारबाट संकलित पैसाले आफैँ पुष्टिएका उदाहरण छन् ।
यसैबीच जसपाभित्र देखिएको कलहले पार्टी विभाजन तिर गएको छ । एमालेको कलह जसपामा सरेपछि महन्थ ओलीतिर र उपेन्द्र देउवातिर लाग्दा विभाजनको स्थिति आएको हो ।
अर्काको विश्वास गर्दा हिँस्स देउवा
डा.कोइराला एक्लै सभापतिको प्रचारतिर
२१ माघ २०७७, बुधबार ०४:०८ Tamakoshi Sandesh